WestBromwich Albion Vs. Arsenal ပွဲကြိုသုံးသပ်ချက်	@AMZ@	ဆောင်းပါး	ကစားမည့်ရက် - ၆-၁၀-၂၀၁၃ တနင်္ဂနွေနေ့ 
ကစားမည့်အချိန် - မြန်မာစံတော်ချိန် ည ၉း၃၀
ကစားမည့်ကွင်း - The Hawthorns — West Bromwich
UCL : Arsenal2:0Napoli Highlight	Ranger	မှတ်တမ်းများ	Arsenal2:0Napoli Highlight
Updated- Add mediafire Link for Goals Highlight and SKYSPORT HD Highlight.... Read more... Add new comment
EPL : Swansea City 1:2 Arsenal Highlight	ArsenalMyanmar	မှတ်တမ်းများ	Swansea City 1:2 Arsenal Highlight
ဆွမ်ဆီးအသင်း နှင့်ပွဲပြီး အာဆင်ဝင်းဂါး ပြောစကားများ	myanmargunner	သတင်းနှင့်အင်တာဗျူးများ	အာဆင်နယ် နည်းပြကြီး အာဆင်ဝင်းဂါးသည် ဆွမ်ဆီးအသင်းအား ၂ ဂိုး ၁ ဂိုးဖြင့်အနိုင်ရပြီးသည့်နောက် မီဒီယာ များ နဲ့ တွေ့ဆုံ စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Read more... Add new comment
Arsenal Myanmar တွေ့ဆုံပွဲ	Gu Ru	Supporters Club	Arsenal myanmar facebook fan page, Like 30000ပြည့်တွေ့ဆုံပွဲကို လာမည့် စနေနေ့ ၂၈၊ ၉၊ ၂၀၁၃ မှာ ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။အာဆင်နယ်မြန်မာက မန်ဘာတွေလည်း မဆုံဖြစ်တာ ကြာပြီ ဖြစ်တာမို့ ဒီပွဲလေးကို အားလုံး စုံစုံညီညီ ကြွရောက်ကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
EPL : Arsenal3: 1 Stoke City Highlight	ArsenalMyanmar	မှတ်တမ်းများ	Flamini - Man of the Match of today match...Full Match Download....First Halfhttps://hotfile.com/dl/246820583/bb0562c/ARS_STO_1H_09220213.flv.html - 553.7 MB....Second Halfhttps://hotfile.com/dl/246827212/ac0c3e3/ARS_STO_2H_09222013.flv.html - 541.7 MB
credit. to fb.tz........................................................................................................................All Goals Highlighthttp://www.mediafire.com/?atr3m85k69c08nm 20.5 MBcredit to youtube and upload by Arsenal Myanmar....MOTD HD Highlighthttp://uploaded.net/file/9e9lt9li
Arsenal vs. Stoke City ပွဲကြိုသုံးသပ်ချက်	@AMZ@	ဆောင်းပါး	၂၂-၉-၂၀၁၃ တနင်္ဂနွေနေ့မြန်မာစံတော်ချိန် ည ၇း၀၀ အချိန်တွင် အာဆင်နယ်အသင်းဟာ စတုတ်စီးတီးအသင်းကို အီးမရိတ်ကွင်းတွင် အိမ်ရှင်အဖြစ် ဧည့်ခံကစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ လက်ရှိပရီးမီးယားလိဒ်ဇယားတွင် ၄ပွဲကစားထားပြီး အာဆင်နယ်ဟာ ရမှတ် ၉ မှတ်ဖြင့် နံပါတ် ၂ နေရာမှာ ရယူထားသလို စတုတ်စီးတီးအသင်းဟာလည်း ရမှတ် ၇ မှတ်ဖြင့် နံပါတ် ၇ နေရာတွင် အသီးသီး နေရာယူထားကြပါတယ် ။
UCL : Maseille 1 :2Arsenal highlight	ArsenalMyanmar	မှတ်တမ်းများ	Marseille 1-2 Arsenal
လူသစ်အိုဇေးလ်၊ ခြေစွမ်းပြသော ရမ်းဆေးနှင့် အာဆင်ဝင်းဂါးအတွက် ပြဿနာများ	Gu Ru	ဆောင်းပါး	အာဆင်နယ်က ဆန်းဒါးလန်းအသင်းကို သုံးဂိုး တစ်ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ပွဲမတိုင်ခင်အထိတော့ သတင်းစာ ခေါင်းကြီးပိုင်းနဲ့ အာဆင်နယ် ပရိသတ်ရဲ့ ပါးစပ်ဖျားမှာ ရေပန်းစားနေခဲ့တာက စံချိန်တင် ပြောင်းရွှေ့ကြေးနဲ့ ရောက်လာခဲ့တဲ့ ဂျာမန်စတား အိုဇေးလ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အိုဇေးလ်ရဲ့ လှပတဲ့ အဖွင့်ပွဲစဉ်နဲ့အတူ လူတိုင်းရဲ့ အာရုံစိုက်မှုကို ရရှိခဲ့တာကတော့ အာရွမ်ရမ်းဆေးပါပဲ။
ရမ်ဆေးဟာ ဒီရာသီမှာ အသင်းအတွက် ဒုတိယအကြိမ် အဖြစ် နှစ်ဂိုး သွင်းယူပေးခဲ့ပြီး အသင်းအတွက် အဖိုးတန် သုံးမှတ်ကို ရယူပေးခဲ့ပါတယ်။
EPL Sunderland 1 :3Arsenal Highlight	ArsenalMyanmar	မှတ်တမ်းများ	Full Match HD - 1 GBhttp://ul.to/qm58s96nhttp://ul.to/xe448ot8
Full Match - HD - English Commentary - Setanta SportsFirst Halfhttp://hotfile.com/dl/245576368/58b4a23/Sunderland.v.Arsenal.1st.half.avi.html 622.2 MBSecond Halfhttp://hotfile.com/dl/245584447/c8fe553/Sunderland.v.Arsenal.2nd.half.avi.html 671.2
Highlight DownloadQuality - Normal , Size - 5.1 MB
« Start Prev 1234567 8910 Next End »	Page 10 of 212	Next Match: